NAMAKIA : Nomen’ny Complants Ouest sucre paompin-drano ny vahoaka
Velaran-tany 700ha no voatondraka ankehitriny taorian’ny nametrahan’ny orinasa Complants ouest sucre paompin-drano miisa telo ao amin’ny fokontany Beronono, Marovato ary Bekofafa. 26 septembre 2017
Io velaran-tany io no natao hambolen’ny mponina vary hamatsy ny fokonolona sy ny mpiasa ao amin’ny orinasa ouest sucre. Tamin’ny herintaona dia ratsy ny vokatra noho ny tsy fahampian-drano. Taorian’ny fametrahana io paompy io dia velaran-tany mirefy 620ha no efa voavoly. Miezaka manampy ireo mponina any an-toerana ity orinasa mpanodina siramamy ity. Ankoatra ny rano dia nanome trakitera ihany koa izy hiasana tany no sady nanome zezika.
Efa misy paompy ihany koa amin’i Mahavavy sy Matsabory. Mampiasa olona miisa 2300 ity orinasa ity, nanomboka tamin’ny fisokafany tamin’ny taona 2007. Siramamy 20 000taonina sy toaka 20 000hl no vokarin’izy ireo tamin’ny herintaona. Izany dia noho ny tsy fahampian’ny rano ka tsy ampy ny saccharose amin’ny fary. Hanatsarana ny vokatra dia nametrahana paompin-drano manampy amin’ny fanondrahana ny renirano sy Matsabory ka dia vinaniana ho 30 000 taonina any ho any ny vokatra amin’ity taona ity farafahakeliny. Marihina fa voafetra ny vokatra azon’izy ireo aondrana fa amatsiana ny tsena anatiny ny ankamaroan’ny vokatra ao.
Ny faikam-pary kosa dia anodinana ny milina mpamokatra herinaratra mamatsy herinaratra ny tanànan’i Namakia iray manontolo.
Misy hatrany ny tsy manaraka fandaminana
Betsaka ireo fokonolona no manorim-ponenana amin’ny tanin’ny Ouest sucre. Noho ny fisian’io ozinina io dia mandroso ny tanàna ary misy toekarena mihodina ao. Manampy betsaka amin’ny sosialim-bahoaka ny orinasa ka ankoatra ireo mpiasa ao aminy dia misy koa ireo mamboly amin’ny taniny, tsy mamboly fary ihany fa mamboly vary sy vokatra fihinana hafa.
Araka ny ifanarahana amin’ny orinasa dia an’ny mpamboly ny roa ampahatelon’ny vokatra fa ny iray ampahatelony kosa an’ny orinasa, hanaovana ny fandaniana amin’ny fanatsaràna. Toy ny solika am-pandehanana ny paompin-drano, ny famatsiana ara-pitaovana ary ara-jezika. Toy ny mahazatra anefa dia misy hatrany ireo manoa randrana ka mamaly ny fandaminana izay napetraka ary milaza fa azy ny tany fa efa namboly teo ny dadilahiny.
Marina tokoa izany saingy samy mahafantatra ny rehetra fa tanin’ny Sirama Namakia taloha ireo tany ireo izay novidian’ny ouest sucre complants. Marihina ihany koa fa hatramin’izay dia tsy mandoa vidin-jiro ny mponina any fa mahazo herinaratra maimaimpoana. Izao vao jerena ny fomba hahafahana mampandray anjara ny mpampiasa herinaratra rehetra ho fanatsarana hatrany ny toerana. Ny olana anefa dia maro ny mpanararaotra sy zatra omem-potsiny ka manohitra ny lamina izay apetraka.
Araka ny nambaran’ny mponina mahatsapa ny soa ataon’ity orinasa ity ho azy ireo anefa dia vitsy an’isa ireo mpanakorontana ireo.